Hazoto hihinana ampalibe ianao rehefa mamaky ireto vokatsoa lehibe ireto • Madagossip
il y a 1 année 2.3 K
Betsaka ireo zava-maniry na voankazo hitan’ireo siantifika fa mitondra soa lehibe ho an’ny fahasalamana, isan’izany ny Ampalibe.
Fantatrareo ary ve izany voankazo izany? Any amin’ny tany mafana no tena ahitana azy io toa ny Nosy La Réunion, Brezila, any Malaisie na ihany koa Thailande, tsy ambaka izany i Madagasikara. Efa ahitana azy io eto an-drenivohitra raha tsy itanisa fotsiny isika ny hita etsy amin’ny fiakarana Ambohibao iny, any amorontsiraka ihany koa anefa no tena mampalaza azy io indrindra amin’ny vanim-potoanan’ny fialatsasatra iny. Ny Ampalibe antsoina « jackfruit » amin’ny teny anglisy na ihany koa « pomme de jacque » na « jaque ».
Ny endriny sy ny tsirony no tena mba mahaliana ny anandrana azy fa eo ihany koa ireo vokatsoa tsara tena mampiavaka entiny amin’ny fahasalamana. Fantaro ary ireo teboka 5 tsara fantatra amin’izany :
Mampitombo ny hery fiarovana sy miaro amin’ny homamiadana
Ny Ampalibe dia manankarena vitamina A, B, C ary fibra. Manankarena ireo karazana singa toan’ny calcium, ny fer, ny magnésium, ny sélénium, ny cuivre, ny phosphore ary koa ny potassium. Isan’ny miaro amin’ny homamiadanan’ny tsinay, ny nono, ny tranon-jaza, sns ihany koa ny fananany ireo singa roa dia ny saponine sy ny lignane.
Mampihena ny fahatapahan’ny lalan-drà mifandray amin’ny fo
Ny Ampalibe dia misy vitamina B6 izay manampy be dia be amin’ny aretim-po. Ny vitamina B6, B12 izay mampihena ny aretim-po sy ny mety ho fahatapahan’ny lalan-drà.
Ampalibe na Jackfruit
Mampitombo ny tahan’ny magnésium
Ny magnésium dia singa fototra mahatsara ny fahasalamana tokoa, ny tsy fahampiana azy io dia mety iteraka vokadratsy lehibe. Mba hiadiana amin’izany ary dia mihinana ampalibe fa mahatratra hatramin’ny 15% ny magnésium entiny.
Manatsara ny fandevonan-kanina
Ny voan’ny ampalibe dia manankarena fibra izay manampy betsaka amin’ny olan’ny fandevonan-kanina sy ny fitohanana.
Mampihena ny aretin’ny vanintaolana
Arakin’ny efa voalaza fa manankarena calcium hatramin’ny 6% ny ampalibe ka manampy betsaka amin’ny fahamafisan’ny taolana tokoa. Ny calcium izay tena singa ilaina tokoa arakin’ny voalazan’ny fikambanana « Fondation Nationale d’ostéoporose ».
Marihina fa afaka hoanina arak’izay hitiavanao azy ny ampalibe na manta na masaka na mamy na masira fa manana tsiro toy ny akondro izy rehefa masaka ary toy ny hena rehefa andraona. Mazotoa mihinana ary.
Tagsampalibe calcium cancer homamiadana jaque magnesium ostéoporose